Tsy voatery ny mangarahara, tsy azo itokiana ny marina. Martech Zone
Tsy voatery ny mangarahara, tsy azo itokisana
Alarobia, Septambra 10, 2014 Alahady, Jolay 19, 2015 Douglas Karr
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, dia teo amin'ny toerana mety hialana amin'ny fizarana ny ankamaroan'ny fiainako manokana amin'ny Internet aho. Nozaraiko ny ankamaroan'ny diako nihena lanja, niady hevitra momba ny politika sy ny teolojia aho, nizara vazivazy sy horonan-tsary tsy dia milay aho, ary farany teo - nizara takariva iray nisotroana zava-pisotro vitsivitsy aho. Mbola tsy tanteraka tanteraka aho mangarahara an-tserasera, saingy tena marina aho.
Ilay antsoina hoe mangarahara dia haitraitra. Manakaiky ny 50 taona aho, manana ny orinasako manokana, miaina fiainana hafahafa tsy misy faniriana hanangona olona an-tapitrisany aho. Tian'ny namako aho fa mizara be dia be amin'ny Internet ary ny orinasa miasa miaraka amiko dia mahafantatra ahy sy tiako. Indraindray ny olom-pantatra sasany dia tsy mankasitraka azy… amin'ny fimonomonona amin'ny hadalana sy fisotroan-toaka. Manana namana sy mpanjifa ampy ahy aho, ka tsy raharahako izay eritreritry ny hafa.
Tsy manenina aho amin'ny fizarana zavatra ato amin'ny Internet. Mahatsiaro mafy aho fa tokony handre ny tolona ataoko ny olon-kafa ary hahita ny tsara sy ny ratsy amin'ny fiainana. Mino aho fa maro amintsika no mitazona persona sandoka an-tserasera. Nandefa ny sarin'ny fianakavianay tonga lafatra izahay, ny sakafonay tonga lafatra, ny fialantsasatra tonga lafarinay, ny tranonay tonga lafatra… ary tsy azoko antoka fa tena manampy izany. Alao an-tsaina ny maha-matihanina matihanina na tompona orinasa anao ary mamaky fanavaozana fotsiny aorian'ny fanavaozana ny fomba mahasosotra izao tontolo izao ary tsara ny orinasa isan'andro isan'andro, mety hanontany tena izy ireo raha tena notapahina noho izany izy ireo.
My mangarahara Tsy izaho ve ny manandrana manimba na manangana ny lazako an-tserasera, fa izaho irery. Mizara zavatra betsaka aho mba hampahafantarana ny olon-kafa fa manana andro tsara, andro ratsy, andro mahatsiravina aho, ary indraindray fandresena kely hafa izay tiako hankalazana amin'ny hafa… na tsy fahombiazana azoko nampiasa torohevitra vitsivitsy. Te-ho marina aho, ka mizara betsaka araka izay azoko atao ao anatin'ny antony. (Tsy misy mizara ny zava-drehetra!)
Rehefa mahita ny fiainana an-tserasera amin'ny olona iray aho ary mahita ny tonga lafatra fotsiny dia very ny fahalianako sy ny finoako fa misy ny maha-azo itokiana ilay sary novolavolain'izy ireo. Lasa leo aho ary tsy misy akony firy ny tenin'izy ireo, raha misy. Raha vonona ny handainga amin'ny fiainany an-tserasera izy ireo dia mety vonona ny handainga amiko amin'ny zavatra hafa.
Ny mizana mangarahara
Ampiako ihany fa voaambina tsotra izao ny hafa satria tsy maintsy mitantana sambo tery… Manaja izany aho. Raha miakatra amin'ny indostria ianao ary ny tanjonao dia ny handroso ao amin'ny efitrano fivoriana, tsy dia manan-tsafidy ianao. Miaina ao anaty fiarahamonina tena mahay mitsara isika ary ny fanaovana ny persona matihanina dia mety ho filàna iray. Ary mety ho ampahany amin'ny toetranao fotsiny ny fitazonana ireo zavatra manokana hanakaiky sy hizara ireo zavatra ankapobeny. Amin'ireo tranga roa ireo dia mbola azo itokisana ihany izy io. Ny personas sandoka fotsiny no tsikerako.
Tsy dia miresaka momba ny ratsy eto amin'ny Internet ny orinasa ary tsy haiko izay mangarahara. Na dia tsy mahomby aza ny antsasaky ny orinasa rehetra dia mahalana ianao no maheno zavatra amin'ny Internet momba ny tolona ataon'ny orinasa iray mandra-pahatapitry ny tara. Amin'ny toekarena sarotra, mampalahelo izany. Mieritreritra aho fa mila mizara bebe kokoa momba ireo fanamby eo amin'ny sehatry ny indostria isika ka maro ny orinasa tsy mila manao ireo hadisoana nataontsika.
Izao fotsiny ny tiako holazaina… raha ny zavatra zarainao amin'ny tamba-jotra sosialy, ny mpanjifa ary ny vinavinanao dia olona diso fa tonga lafatra ny zava-drehetra, tsy mangarahara ianao ary tsy hatoky anao. Tsy marina ianao. Raha mizara be loatra ianao dia mety hampidi-doza ny fahafahanao manararaotra satria tsaraina ny olona. Mila mahita mangarahara isan-karazany izay mahasoa anao sy / na ny orinasanao ianao. Misokatra tsara ny ahy fa mety tsy ho anao ny anao. Mandrosoa am-pitandremana.
Angamba tokony hiantso ny paikadintsika amin'ny Internet isika translucency, mety ho famaritana marina kokoa io.
Ny tombony amin'ny Marketing sy Sales amin'ny Marketing Automation
Sep 11, 2014 ao amin'ny 9: PM PM
Doug ary tsara sy mazava.
Ny zavatra tsara amin'ny maha-tena izy anao dia ny hahitanao hoe iza ny tena namanao.